२ दिन नहुँदै काठमाडौं उपत्यकामा लगाएको नियम ठिक नलागेपछि प्रसासनले नियमलाइ सच्च्याउदै जारि गर्यो नयाँ बिज्ञप्ति, बनाइदिने भयो सहज ! अब के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ? – Classic Khabar
२ दिन नहुँदै काठमाडौं उपत्यकामा लगाएको नियम ठिक नलागेपछि प्रसासनले नियमलाइ सच्च्याउदै जारि गर्यो नयाँ बिज्ञप्ति, बनाइदिने भयो सहज ! अब के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
April 28, 2021 156
जिल्ला प्रशासनका कार्यालय काठमाडौंले वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी थप आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले अत्यावश्यक सेवामा केही बुँदाहरु थप गरी आदेश जारी गरेका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले मंगलबार जारी गरेको थप आदेशमा विवाहका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनका लागि पास नचाहिने उल्लेख छ।
तर उक्त सवारीमा दुलहा-दुलही पनि हुनुपर्नेछ भने १५ जनासम्म जन्ती जान पास नचाहिने भएको छ। तर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्नुपर्ने भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
Prev१५ घण्टासम्म बुवा आमाको शव घरमै, युवकले पाएनन् कसैको सहयोग : श्रीमती समेत भेन्टिलेटरमा
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन,बैशाख १६ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल